Iimvelaphi eziMnandi zokuza eSpeyin
Iimvelaphi eziMnandi ezivela eSpain
Ubuncwane bekhaya bokuThabatha iSpeyin
Kutay Tanir / Getty Izithombe
Xa uceba uhambo lwakho lwaseSpain , qi ni kekile ukuphuma egumbini lakho ukuze ubuyise izikhumbuzo ezifana nebhokisi lewayini lesikhumba, umtsalane waseSpeyin, okanye ibhotile yeherher.
Kungakhathaliseki ukuba uthengisa isipho esipheleleyo kumntu omthandayo okanye ufuna ukufumana into ethile yokukhumbula uhambo lwakho, kukho iindawo ezininzi ezithengileyo kwiindawo zokuvakasha ezifana neBarcelona naseMadrid apho unokuxhasa abaculi beendawo kunye nokuzisa ekhaya isiqwenga senkcubeko kuwe okanye ngabahlobo bakho.
Gcina ukhumbule ukuba ezinye izinto ezinjengeenkemba ezenziwe ngezandla kunye neengcola zaseSpain zingadinga ukuphonononga okongeziweyo kwisikhumulo sezindiza-kwaye ngokuqinisekileyo ayikwazi ukupakisha kwi-bag-bag-so-jonga izithintelo zokuhamba kwi-airline yakho ngaphambi kokuthenga izinto ezinje.
I-Bullfighting Poster esuka kwi-Seville
Krzysztof Dydynski / Getty Izithombe
Wonke uluhlu "olungcono kakhulu lwesikhumbuzo" lufuna ubuncinane into emnye into ehambelana nokuba ngukhenketho kwelinye ilizwe, kwaye eSpain, loo nto yipowusta yokuloba ivela eSepville negama lakho apho igama lenkomo lidla khona. Nangona ezi zikhethwa ngokukhethekileyo eSeville, ziyakwazi ukufunyanwa naphi na apho inkunzi. Enkulu kubantwana, le mibhobho iphrinta iphrinta imifanekiso yeflamenco kunye-nokuba unomdaniso kwintsapho. Ukufumana abathengisi abazenzayo, jonga iimbombo ezithi " tu number aqui ," oku kuthetha "igama lakho apha" ngesiSpeyin.
Inkemba evela eToledo
I-LatitudeStock - TTL / Getty Izithombe
I-Toledo iye yaziwa ngokuba yintsimbi kangangamakhulu amabini kwaye iinkemba zayo neengweletshezi zazixhobisa amahashe aseYurophu kwaze kwaba yilapho izixhobo zomlilo zanikezela. Yenziwe ngoku kuphela kubakhenkethi, iyakumgangatho ophezulu kwaye ifanelekileyo kubalandeli bezixhobo zembali. Ukuba ungenayo imfuneko yenkemba, ukuvula iileta ezenziwe kwi-Toledo zinyithi zingathengwa malunga needola ezili-12. Naluphi na owuthengayo, nangona, qhubeka ukhumbula ingakumbi kufuneka uthunyelwe ekhaya eUnited States okanye ugcinwe kwimithwalo yakho ehlolwe-ukuba iyafaneleka.
Iwayini yenziwa kulo lonke elaseSpain, kodwa akukho nanye efana nevino de Jerez , eyaziwa ngokuba yi-sherry ngesiNgesi. Ukuba awunakunambitha i-sherry, lindela into ehlukile kwiwayini yakho eqhelekileyo. Isimo sezulu esithile seJerez kunye neendlela apho ama-sherries anqatyisiweyo abanike ukunambitheka okungavamile oko kuthatha okufutshane ukuzisebenzisa.
Ungathenga iibhotile ze -herry kwiJerez malunga ne-$ 6, kodwa isingeniso esilungileyo siza kukuzisa ibhotile yakho kwi- tabanco (i-sherry bar) e-Jerez uze ubacele ukuba bakuzalise ngokucacileyo ukusuka kumgqomo. I-Jerez iphinde ibe nekhaya le-brandy yaseSpanish, ukusela okulula kunye ne-grapey version ye-cognac.
ISpanishi IFili Evela Barcelona
Eladio Anxo Fernández Manso / Flickr / CC BY 2.0
Ushushu lwehlobo laseSpanish alugqibekanga ngaphandle kwabasetyhini abaneminyaka eliphakathi kweminyaka ephakathi. Bangase babonakale bexakeke kodwa abafazi baseSpeyin bafunga ngabo, kwaye ngokwenene basebenza kakuhle kwizakhiwo ezingenawo umoya. I-Abanicos eSpain yavela malunga nexesha elifanayo U-Flamenco ukudansa waba yintando apho kwaye sele isetyenziswe ngabantu abahloniphekileyo kunye nabadlali abafanayo ngeenkulungwane.
Flamenco Umculo Ovela eMadrid
UHolger Leue / Getty Izithombe
I-Flamenco isaphila kwaye iyathandwa kulo lonke i-Andalusia, iMadrid, neBarcelona, ​​apho ungena khona kwisitolo se-flamenco kwaye ucele umncedisi ukuba ancede ekukhetheni iCD. Nangona baninzi abaculi abaphezulu beFlamenco ukuba uhlolisise, ungaphinda uhlole italente entsha ezitratweni zaseSpeyin okanye ukuya kwi- Flamenco Festivals ezininzi kwilizwe ehlobo. Thenga itrekhodi yakho yomculo oyithandayo ukuze ukwazi ukwabelana nenkcubeko nomculo kunye nabahlobo bakho kunye nosapho ekhaya.
UJamón Iberico (uHamani ophilileyo waseSpain) Ukususela eHuelva
UJon Hicks / Getty Izithombe
Intetho yaseSpain malunga neFrentshi ithetha ngewayini yabo. Ukunyanga ubuncinane ngonyaka, ngokuphindaphindiweyo ezimbini, i-jamón yinxalenye yesisitye sokutya kweSpanish. Ngokudabukisayo kukho inxalenye "yeengubo ezintsha" zika-emperor malunga naso kwaye ininzi yenyama ayinakuxhamla kubangenayo. Thenga i-jamón yakho e-Huelva, eSalmanca, okanye kwi-Alpujarras, kufuphi naseGranada; i- chorizo (i-sausage e-spicy) ilungile ukusuka apho, nayo.
I-Kukuxumusu T-Shirt yaseMadrid
UJeremy Eades / Flickr / CC BY-SA 2.0
Nangona le nkampani eyaziwayo yaseSpeyin i-t-shirts ingafumaneka lonke ilizwe, le nkampani yaseBasque inesitolo eMadrid kufuphi neMetro: I-opera indlu. Kanye nje xa u tyelela isixeko saseNew York, unokufumana "I (Intliziyo) iMadrid" i-t shirt okanye ukhethe ukuhlonipha okunye xa uhlala khona eSpain. Nangona oku kungathi kubonakale ngathi kuyinto enobomi, qwalasela ukuthenga ihembe eligqithiseleyo kwaye ulisebenzise ukuze ulale xa uhlala ekhaya ukuba awucingi ukuba uya kuwugqoka!
UKelly Cheng Uhambo lwezithuthi / i-Getty Izithombe
I-Saffron, okanye i- azafrán ngesiSpanish, isisithako esibalulekileyo kwi-paella kwaye yenza nayiphi na into yokutya yaseSpanish ifanelekileyo. I-Saffron ibiza kakhulu xa ithengiswa e-United States, ngoko ukuyithengela ekhaya eSpain kunokukugcina imali kwaye kukunike izithako ezingcono zokuzisa ekhaya. Indawo ephantsi kakhulu yokufumana le spice isondele kwikedareli yaseGranada, apho abathengisi nabo bathengisa ezinye iinongo ezifana ne- Pakistani , itiye elimnyama kunye ne-sinamoni, i-vanilla kunye ne-cardamom pods.
I-Bota (Ikhumba leTyhuphu lewayini) Ukusuka eSigüenza
flydime / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
Unokuzenza ngathi ungumlimi waseSpain uthatha uhambo olude ukusuka kwikhaya lakho elisemaphandleni ukuya kwiimakethi edolophini elandelayo kunye ne- bota , ibhotile yebhotile epheleleyo yokusela ekuhambeni. Ingcaciso emnyama emfanekisweni yinyaniso kunye neendleko malunga ne-36 zamawaka ngelixa elinye elilumkileyo ngakwesokudla ngumntu ovelelekayo othe wancinci.
Zonke iibhotile zinemigodi encinci yokusela; Ingcamango yokugubha iwayini emlonyeni wakho ngaphandle kwebhotile echaphazela imilomo yakho, engathatha ixesha elincinane ukuba ufunde kodwa indlela yokuzonwabisa. Nangona kungenakucetyiswa ukuba ugcwalise i- bota yakho newayini yaseSpanish phambi kokuba ubalekele ekhaya, awuvumelekanga ukuzisa isikhumbuzo sakho esitsha kwenye yeendwendwe ezininzi zewayini eSpeyin ngoxa ulapho.
Ioli yeOlive evela eAndalusia
ULuis Martinez / i-Pics yoyilo / i-Getty Izithombe
Ioli yeoli yomnqophiso yaseSpain yinto efanelekileyo kwihlabathi-nangona oko amaTaliyane namaGrike athi-kunye neJaen e-Andalusia yenza isiqingatha sezinto zonke ezenziwe kwi-Andalusia, okwesithathu kweoli yeSpeyin, kunye neyeshumi yezinto ezidliwe kwihlabathi lonke . Kungenokuba nzima ukuba kuthwale ubuninzi bekhaya, ngoko ke uthenge i-bhotile encinci yebhotile njengomfanekiso (kwaye uyigcwalise rhoqo ngamafutha aseSpeyin athengwe ekhaya) okanye ugcwalise yonke indawo yokugcina emithwalo yakho ngaphambi kokuba ushiye iSpain kunye namanye iibhotile. Zonke izitolo zaseSpeyin zigcina ukukhethwa kwamanquma omnquma.
Isikhokelo soTyelelo kwiCamino de Santiago
Izitimela zasebusuku eSpain
Imikhosi eSpain: Ikhalenda yeZenzo
Indlela yokufikelela eBenicassim esuka eValencia, eMadrid naseBarcelona
Eyona ndlela inokuthi usebenzise njani i-Guiri
Uhambo olugqibeleleyo oluya eSpain
Ii-Ordinances ze-Firework e-Austin
SW Steakhouse eWynn Las Vegas
I-Peek kwi-Celebrity Edge Cruise Ship
Iiklasi ze-Kids Yoga eHouston
Indlela yokufaka isicelo selayisenisi yomtshato kwi-Allegheny County
I-Quail Springs Mall yaseKorea
Isikhokelo seSuku seMemfis Valentine
Imifanekiso ye-Bear Trap kwi-PGA National Resort kunye ne-Spa
Indlela yokuchonga iiNyoka ezibulalayo e-Arkansas
Uluhlu olubanzi lweeBhunga e-Illinois
I-Chelsea Hotel, iDowntown Toronto
Ukwenza iSense ye-Ohio Gun Laws
Isikhokelo kunye neGall Photo yeGay City
Indlela yokufumana iikiti zeTanglewood ze-2017